समाचार Archives - Page2of 269 - Juneli Daily
सबै प्रदेशबाट ओली पक्षलाई किक आउट गर्ने यस्तो तयारी ! कहाँ-कसरी ?
काठमाण्डौ – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा नेकपा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेको घटनाले केन्द्रीय राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भएको फ्लोर क्रसले एमालेको नेतृत्वमा...	Read more »
कर्णालीमा माओवादीलाई सहयोग गरेपछि नेपालसहितका सांसद एमालेबाट निस्काशित !
काठमान्डौ – कर्णाली प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाउनुले नेपाली राजनीतिमा नयाँ गठबन्धन उदयको संकेत गरेको छ । शाहीलाई नेपाली कांग्रेसका ६ र एमालेबाट फ्लोर क्रस गरी ४ जना सांसदले विश्वासको...	Read more »
एमालेलाई फुटबाट जोगाउन वार्ता सुरु !
JD — April 16, 2021 add comment
काठमान्डौ – नेकपा एमालेलाई फुटबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट दुई प्रभावशाली नेता सक्रिय भएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ सक्रिय भएका हुन् । पौडेल र नेम्वाङले...	Read more »
अन्तत: प्रचण्ड र ओली यस्तो छ मिल्ने संकेत !
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गरेका छन्। कोन्जोसोम गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन गर्न दक्षिणी ललितपुर पुगेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई फोन गरेको बताए। भवन उद्घाटनपछि छोटो...	Read more »
काठमाडौँका ३ सहित १४ जिल्लाका विद्यालय बन्दको घोषणा ! कुन-कुन जिल्ला ?
काठमाडौँः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मानिसको भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थानहरूमा बेलुका सात बजेपछि सहभागी नहुन अनुरोध गरेको छ। बिहीबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै रात्रिकालीन व्यवसायहरू र भिडभाड हुने स्थानमा सहभागी नहुन अपिल...	Read more »
माओवादी केन्द्रका थप सांसदको पद खारेज , को-को परे ?
माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका अछाम क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित झपट बोहरालाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले दल...	Read more »
विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ ओलीबाट छुट्टिए !
काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेर नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले समानान्तर कमिटीको अभ्यासलाई तीब्रता दिएका बेला अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय नेताहरू विष्णु पौडेल र सुवासचन्द्र नेम्वाङ छुट्टै...	Read more »
एमाले र जसपाको मन्त्रालय बाँडफाँड सकियो !
काठमाडौं – सरकारमा जाने कुरालाई लिएर सकसमा परेको जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा ) र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार बालुवाटारमा संवादमा जुटे। पटक पटक वार्ता गरेका दुई पक्षबीच हिजो बालुवाटारमा भएको...	Read more »
सत्ता सहकार्यको सम्झौतापछि रेशम चौधरीलाई छाड्न ओलीको निर्देशन !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच सत्ता सहकार्य हुने भएको छ । जसपाले उठाउँदै आएको मागप्रति प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकारात्मक रहेकाले सता सहकार्य...	Read more »
माओवादीले हटाएका चार सांसदको पत्र निर्वाचन आयोगमा , नयाँ चुनाव तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेर हटाएका प्रतिनिधि सभाका चार सांसदको निस्कासनसम्बन्धी औपचारिक पत्र निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । रिक्त रहेका पदहरुमा उपनिर्वाचन गराउन आफू तयार रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ...	Read more »